PacketZoom's Mobile Expresslane CDN Niara-niasa tamin'ny Amazon Cloudfront | Martech Zone
PacketZoom's Mobile Expresslane CDN Niara-niasa tamin'ny Amazon Cloudfront
Talata, Febroary 6, 2018 Alarobia, Febroary 7, 2018 Douglas Karr
PacketZoom, orinasa iray manatsara ny fahombiazan'ny fampiharana finday amin'ny alàlan'ny teknolojia tambajotra finday anaty fampiharana, dia nanambara fiaraha-miasa miaraka aminy Amazon CloudFront hampiditra CloudFront amin'ny serivisy Mobile Expresslane an'ny PacketZoom. Ny vahaolana amboarina dia manome ny mpandrindra fampiharana finday ny sehatra finday voalohany sy tokana ihany ho an'ny filan'ny fampisehoana tambajotra rehetra.
Io no sehatra finday rehetra voalohany indrindra izay miatrika ny filan'ny fampisehoana finday rehetra - fandrefesana, fahombiazana amin'ny kilometatra farany ary fampisehoana kilometatra afovoany. Ny hevi-dehibe amin'ny serivisy dia ahitana:
PacketZoom's Mobile Expresslane manafaingana ny fampiharana finday hatramin'ny 3x ary mamonjy hatramin'ny 90% ny fahatapahan'ny tambajotra ho an'ny mpanonta fampiharana toa an'i Glu, Sephora, Photofy, Upwork sy ny hafa.
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny CDN an'ny CloudFront, PacketZoom sy Amazon no voalohany nanolotra vahaolana tambajotram-pifandraisana farany.
Miaraka amin'ny PacketZoom farany finday haingana, ny mpanjifa dia miaina ny vahaolana fandefasana fampiharana finday tsara indrindra.
Ny mpanjifa PacketZoom izay efa mampiasa Amazon CloudFront any amin'ny firenena samihafa dia misy ny Glu Mobile, Upwork, Photofy (US), Perfect Corp (Asia), ary Belcorp (Amerika Latina).
PacketZoom no mpitarika amin'ny sehatry ny fanafainganana ny fampiharana finday miaraka amin'ny teknolojia Mobile Expresslane, izay manafaingana ny fampiharana finday hatramin'ny 3x ary mamonjy hatramin'ny 90% ny fahatapahan'ny tamba-jotra ho an'ireo mpanonta fampiharana finday toy ny Glu, Sephora, Photofy, Upwork sy ny hafa. PacketZoom manatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny fampiharana finday amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo barazy mahomby amin'ny finday farany teo. Ny sehatra findainy dia manolotra vokatra feno sy farany ho an'ny Mobile App Performance Management & Optimization (APMO).
Ny vahaolana CloudFront Web CDN an'ny Amazon dia manana ny anjarany lehibe indrindra amin'ireo mpanonta fampiharana finday. Manolotra atiny azo antoka izy amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fandefasana amin'ny kilaometatra afovoany. Miaraka amin'ny haingam-pandeha farany kilometatra finday ao PacketZoom, ny mpanjifa dia miaina ny vahaolana fandefasana fampiharana finday tsara indrindra.
Faly izahay manolotra ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa: Amazon CloudFront - CDN Web malaza indrindra eo amin'ireo mpamorona finday - miaraka amin'ny PacketZoom Mobile Expresslane - ny vahaolana haingana indrindra amin'ny fanafainganana ny fampiharana finday. Izy io dia fivoaran'ny vokatra voajanahary ho antsika, satria maro amin'ireo mpanjifanay no efa mampiasa CloudFront. Shlomi Gian, CEO an'ny PacketZoom
Momba ny PacketZoom
PacketZoom dia mamaritra ny zava-bitan'ny finday amin'ny alàlan'ny teknolojia tambajotra ao anaty fampiharana. Natao manokana ho an'ny fampiharana finday teratany, ny sehatra finday PacketZoom dia manome hery ireo mpamorona fampiharana finday hanatsara ny fahombiazan'ny fampiharana finday amin'ny fotoana tena izy. PacketZoom dia manatsara ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny fampiharana finday amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo barazy mahomby amin'ny finday farany teo, manatsara ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 3x, mamonjy hatramin'ny 90% ny fotoam-pivoriana avy amin'ny fifandraisana TCP ary mampihena ny vidin'ny CDN. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho PacketZoom
Tags: rahona rahona amazonbelcorpcdnrahonafinday glupacketzoomcorp tonga lafatraphotofyupwork
Oogur: manangana sy manara-maso ny URL fampielezan-kevitra amin'ny Google Analytics
Paikady momba ny varotra mifototra amin'ny kaonty no ho avy, ary eto i Groove